တပ်မတော် ဆိုင်ရာ အကြံပြု၊ဆွေးနွေးခန်း: 2011
အနာဂါတ် တပ်မတော်ဆိုင်ရာ မိမိတို့အမြင်လေးများ..၄
လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး တပ်မဟာများ ( x ၅ )
အခုလက်ရှိမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးက အရှေ့တောင်အာရှမှာ အကောင်းဆုံးလို့ အချို့က ပြောကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ S-300 တွေရှိတဲ့ ဗီယက်နမ်က ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာလည်း S-300/400 တွေ HQ-9/20 တွေ Patriot PAC-3 တွေစတဲ့ Long Range Air Defense System တာဝေးပစ်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေ ရှိရင်ကောင်းမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားကြည့်ရင် မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ လက်ရှိ S-75 တွေ S -125 တွေကတော့ စစ်စဖြစ်တာနဲ့ သူတို့က စအဖျက်ဆီးခံရဖို့ ရှိပါတယ်။ လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းမှမရှိတာ။ သူတို့ကို ကာကွယ်ဖို့ ကျောက်တောင်တွေဖောက်ပြီးတော့ ထားရရင်လည်း ဆင်ဖိုးထက်ကို ချွန်းဖိုးကကြီးတော့မှာ။
တာလတ်ပစ် 9K12 Kub တွေ 9K37 Buk တွေကတော့ အချို့ကလည်းရှိတယ်တဲ့ ၊ အချို့ကလည်းမရှိဘူးတဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလောက်တော့ ရှိအောင်လုပ်ရမှာပါ။ 9K331Tor တွေ 9K22 Tunguska တွေ နဲ့တင်ကတော့ အလုပ်မဖြစ်တာ အရှင်းကြီးပါ။ ရေတပ်မှာလည်း FAC တွေမှာ 9K38 Igla (SA-18) ၊ Corvette တွေမှာ 3K95 Kinzhal ( Naval Version of Tor )၊ Frigate တွေမှာ 3S90 Urgan ( Naval Version of Buk ) တပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပါ ဒီမှာတော့ ဒုံးကျည်တန်ဖိုးက သဘောင်္တန်ဖိုးနဲ့စာရင် ဘာမှမရှိပါဘူး။ နောင်တစ်ချိန်မှာတော့ Destroyer တွေရှိလာပြီးတော့ S-300 FM တွေတပ်နိုင်လာရမှာပေါ့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးကို တပ်မတော် (လေ) အောက်မှာထားတာနဲ့ တပ်မတော် (ကြည်း) အောက်မှာထားတာ ဘယ်ဟာပိုကောင်းမလဲပေါ့။ လေတပ်အောက်မှာထားရင် ကြားဖြတ်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု ပိုကောင်းပြီး မြန်မာ့ဝေဟင်ကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်းပိုကောင်းလာမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကြည်းတပ်က ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အခါ ( သူများနိုင်ငံ့ထဲကို ) လိုက်ပါ ကာကွယ်နိုင်စွမ်းတော့ လျော့သွားမှာပေါ့။ ကြည်းတပ်အောက်မှာထားရင်တော့ ပြောင်းပြန်ပေါ့။
ကျွန်တော်ကတော့ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးကို လေတပ်အောက်မှာထားပြီးတော့ ၊ လေတပ် အုပ်စုကြီး ( Group ) တွေကို ကြည်းတပ် တပ်မကြီးတွေနဲ့ တွဲဖက်ထားရင် ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ခံစစ်ဆိုရင် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ လေယာဉ်တွေပူးပေါင်းကာကွယ်မယ်။ ထိုးစစ်ဆိုရင် ခြေလျင်၊ သံချပ်ကာနဲ့တွဲလိုက်သွားမယ်။ ရှေ့တန်းလေယာဉ်ကွင်းတွေကို အင်ဂျင်နီယာတွေ ပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့ လေတပ်ပါလိုက်လာမယ်။
- တာလတ်ပစ်တပ်ရင်း ( x ၂ )
o ပစ်မှတ်ရှာရေဒါ 9S18M1 Snow drift
o ဒုံးတပ်ခွဲ ( x ၃ ) ၊ တစ်ခွဲကို Buk TELAR နှစ်စီး၊ TEL reload တစ်စီး (ကုန်ကျစရိတ် သက်သာချင်ရင်တော့ Buk TELAR တစ်စီးနဲ့ Kub TEL နှစ်စီးပေါ့။ Buk နဲ့ Kub တွေက အတူတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Buk TELAR ရဲ့ရေဒါက Kub TEL ကိုကူပေးရမှာပေါ့။ Kub တွေချည်းသပ်သပ်ဆိုရင်တော့ ပင်မရေဒါ central radar တစ်ခုတည်းကို ဒုံးပစ်ယာဉ်တွေ အားလုံး မှီခိုနေရမှာ စိုးရိမ်လို့ပါ။ ) ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ တပ်ခွဲတစ်ခွဲကို US$ 25 M ပါ။
- တာတိုပစ်တပ်ရင်း ( x ၂ )
o ဒုံးတပ်ခွဲ ( x ၃ ) ၊ တစ်ခွဲကို Tor M-1 TLAR လေးစီး၊ ကွပ်ကဲမှုယာဉ် တစ်စီး ( wiki မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ၈၅ စီးလို့ပြထားတယ်။ Russia ၁၂၀ ပြီးရင်အများဆုံး အသုံးပြုသူပဲ။ ) ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ တပ်ခွဲတစ်ခွဲကို US$ 16 M ပါ။
- ကြိုတင်သတိပေးရေဒါတပ်ခွဲ ( များ ? )
o ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ S-300 system ရဲ့ 64N6 Big Bird ပေါ့ဗျာ။ မဖြစ်နိုင်သေးရင်လည်း လက်ရှိ Galaxy , 1L117 , P-3- တွေပေါ့။ သိပ်တော့အားမရဘူးပေါ့။ S-300 system တစ်ခုလုံး မ၀ယ်နိုင်သေးရင်တောင် 64N6 ရေဒါလောက်တော့ ဖြစ်အောင်ဝယ်စေခြင်တယ်။ ဒါမှ ထောက်လှမ်းနိုင် surveillance လုပ်နိုင်တဲ့ အကွာအဝေးပိုလာမှာပါ။
o ခုချက်ချင်းလုပ်ဖို့ မဟုတ်ပေမယ့် နောင်တစ်ချိန်မှာတော့ ရှိလာရမှာပေါ့။
o ဒုံးတပ်ခွဲ ( x ၃ ) ၊ တစ်ခွဲကို S-300 ဒုံးပစ်ယာဉ် launcher နှစ်စီး၊ တန်ဖိုးက တပ်ရင်းတစ်ရင်းကို US$ 150 M
TELAR Transporter, Erector , Launcher and Radar ၊ Buk စနစ်မှာသုံးပါတယ်။ ဒုံးကျည်လေးစင်းပါပြီး ကိုယ်ပိုင် ရေဒါပါ ပါပါတယ်။
TEL Transporter, Erector, Launcher ၊ Kub system မှာသုံးပါတယ်။ ဒုံးကျည်သုံးစင်းပါပြီး ရေဒါမပါပါ။ ဒါကြောင့် ပင်မရေဒါကို မှီခိုရပါတယ်။
TEL reload Transporter, Erector, Launcher reload ၊ Buk system မှာသုံးပါတယ်။ ဒုံးကျည်လေးစင်းပါပြီး သူကိုယ်တိုင် ပစ်နိုင်တဲ့အပြင် TELAR ကိုပါ ကျည်ထိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ စနစ်တွေမှာတော့ ကရိန်းပါတဲ့ ထရပ်ကားတွေနဲ့ ကျည်ထိုးရပါတယ်။
TLAR Transporter, Launcher and Radar ၊ Tor system မှာသုံးပါတယ်။ ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းနဲ့ ရေဒါပါပါတယ်။
ကျန်တဲ့ ခြေလျင်၊ သံချပ်ကာ ၊ လေကြောင်းချီ စတဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးတပ်မဟာတွေမှာ အင်ဂျင်နီယာတပ်ခွဲ Battlefield Engineer တွေ ထည့်ထားရမှာဖြစ်တဲ့ အပြင် သီးသန့် အင်ဂျင်နီယာတပ်မဟာတွေလည်း လိုအပ်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒီတပ်တွေကတော့ အကြီးစားဆောက်လုပ်မှုတွေကို တာဝန်ယူရမည့် ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ Garrison Engineer တွေပေါ့။ သူတို့က တပ်မကြီးတွေရဲ့ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်မှု အောက်မှာ ရှိနေပြီးတော့ တပ်မကြီးကို သဘာဝနဲ့ လူလုပ် မဟာဗျူဟာ အတားအဆီးတွေကို ဖြတ်ကျော်ဖို့ စွမ်းရည်ပေးမှာပါ။
o မိုင်းစစ်ဆင်ရေးကို BE တွေက လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ရှပ်ထွေးတဲ့ ဗုံးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ လက်တွေ့မကျပါဘူး။ လေ့ကျင့်ရေးဝန်တွေ မလိုအပ်ပဲ များလာလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ အထူးတပ်တစ်မျိုးအနေနဲ့ ဒီတပ်ခွဲတွေကို ဖွဲ့စည်းလေ့ကျင့်ထားရမှာပါ။ ငြိမ်းချမ်းစဉ်ကာလမှာလည်း မြို့ပြမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ကူညီနိုင်တာပေါ့။ ဒီတပ်ခွဲက အဖွဲ့ငယ်အဆင့် စစ်သည်သုံးယောက်အထိ ခွဲထုတ်စစ်ဆင်နိုင်ရမှာပါ။
o ဒါလည်း အရေးကြီးတဲ့ အထူးတပ်တစ်မျိုးပဲခင်ဗျ။ အနည်းဆုံးအဆင့် မိမိစိုးမိုးဒေသရဲ့ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ကို နောကျေအောင်သိနေရမည်လေ။ ရန်သူနယ်မြေကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်တဲ့ အခါမှာတော့ ဒီတပ်တွေဟာ ပထမဦးဆုံး ၀င်ရောက်ရတဲ့ တပ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်မှာပါ။ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်၊ လမ်းတံတားအခြေအနေ တွေကို သိမှတပ်မကြီးမှူးက မဟာဗျူဟာ ခင်းနိုင်မှာပေါ့။ ငြိမ်းချမ်းစဉ်ကာလ ကတည်းက တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ထားရမှာပါ။ ပြည်သူတွေကို အကူအညီပေးနိုင် သလို တပ်ခွဲအတွက်လည်း လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်း အတွေ့အကြုံပေါ့။
o လမ်းအထူးတပ်ခွဲ ( x ၂ )
o တံတားအထူးတပ်ခွဲ ( x ၂ )
 ဒီတပ်ရင်းကတော့ တပ်မဟာရဲ့ အဓိက ဆောက်လုပ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ပါပဲ။ စစ်ဖြစ်နေစဉ် ပစ်ခတ်နေစဉ်မှာကို တည်ဆောက်နိုင်ရမှာပါ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကာလက လီဒိုလမ်းမကြီး ဆောက်ခဲ့တဲ့ မဟာမိတ်အင်ဂျင်နီယာတွေလိုပေါ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် ငြိမ်းချမ်းစဉ်ကာလမှာကတည်းက နိုင်ငံ့တော်ရဲ့ ပရောဂျက်တွေကို ၀င်လုပ်ပေးရင်း အတွေ့အကြုံယူရမှာပေါ့။
 ဒီတပ်ရင်းက ဆောက်လုပ်ရေးတပ်ရင်း လိုသမျှ အထောက်အကူတွေကို ပေးရမှာပါ။ နောက်တန်းမှာ ဆိုရင်လည်း တပ်စခန်းတွေ လိုသမျှ ဆောက်လုပ်ရေး အထောက်အကူတွေကို ဒီတပ်က ပေးမှာပေါ့။
အင်ဂျင်နီယာတပ်မဟာဆိုတော့ အင်ဂျင်နီယာယာဉ်တွေလိုလာမှာပေါ့။ ဒီတပ်မဟာတွေမှာ လိုလာမယ့်ယာဉ်တွေက အရပ်ဘက်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်တွေနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်မှာပါ။ သံချပ်ကာတပ်က အင်ဂျင်နီယာတွေလို AEV, AVLB , ARV တွေမလိုတဲ့အတွက် သိပ်အခက်အခဲမရှိလောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ယန္တရားကြီးတွေက ဈေးတော့ကြီးတယ်ဗျ။
ဒီခေတ်ကို သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆင်ရေးခေတ်လို့ ပြောကြတာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း ရန်သူ့သတင်းကို မရရအောင်ယူ နောက်ကိုယ့်သတင်းကို ရန်သူ ဘယ်လိုမှမရအောင် လုပ်ရမှာပေါ့။ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားရင်တော့ စစ်က မတိုက်ခင်ကတည်းက ရှုံးပြီးသားဖြစ်သွားမယ်နော်။ ထောက်လှမ်းရေးတပ်မဟာတွေက တပ်မကြီးတစ်ခုကို တပ်မဟာတစ်ခုဆိုရင် အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။
o ထောက်လှမ်းရေးတပ်ခွဲ ( x ၂ )
 သတင်းဆိုတာက သူများဆီကသာ ယူလို့ကောင်းတာ ကိုယ့်ဆီက ပေးလို့မကောင်းဘူးလေ။
• ကင်းထောက်တပ်ရင်း ( USMC ရဲ့ Division Recon ပုံစံမျိုး )
o ကင်းထောက်တပ်ခွဲ ( x ၃ )
 ကွန်မင်ဒိုတွေဗျာ။ ရန်သူနောက်တန်းအထိ သွားပြီးကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နိုင်ရမယ်။ ထောက်လှမ်းရေးကိရိယာတွေ သွားထားမယ်၊ ပြန်ယူမယ်။ ဒါ့အပြင် လိုအပ်ရင် တန်ဖိုးမြင့်ပစ်မှတ်တွေကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရမယ်။ ရန်သူခေါင်းဆောင်တွေကို လုပ်ကြံရမယ်။ ဓားစာခံကယ်ဆယ်ရေးတွေကလည်း သူတို့တာဝန်ပဲဗျာ။
• စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးတပ်ရင်း
 ဒါကတော့ တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူကြား အမြင်စောင်းမှုတွေ ဖြစ်မလာအောင်၊ နောက်ပြည်သူ့ ထောက်ခံမှုအပြည့်အ၀ ညှိနှိုင်းနိုင်အောင် လုပ်ပေးမယ့် တပ်ပေါ့။
 မီဒီယာတွေနဲ့ ဆက်ဆံဖို့ပေါ့။ သတင်းထောက်တွေကို ဆက်ဆံဖို့ဆိုတာလည်း မလွယ်ဘူးနော်။ တော်တော်လေးပါးနပ်မှ။ တိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေက လာမဲ့ တပ်မကြီးမှုးတွေကို ဒီနေရာမှာ ကျွမ်းကျင်မယ်လို့ မျှော်လင့်မထားသင့်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဗိုလ်ချုပ်တွေကို မက်အာသာတို့၊ မက်ခရစ္စတယ်တို့လို အဖြစ်မျိုးတွေ မကြုံစေချင်ပါဘူး။
o စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးတပ်ခွဲ ( x ၂ )
 ရန်သူတွေ၊ ရန်သူဖြစ်လာနိုင်တဲ့သူတွေ နဲ့ဆက်ဆံဖို့ပေါ့။
ဒီတပ်မဟာအပြင် တပ်မကြီးအတွက် အခြားသော သတင်းအချက်အလက်ရစရာ တပ်ဖွဲ့တွေလည်း ရှိပါတယ်။ သူတို့ကတော့
• ပစ်မှတ်ရှာတပ်ခွဲ ( အမြှောက်တပ်မဟာ )
• ကြိုတင်သတိပေးတပ်ခွဲ (လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်မဟာ )
• တိုင်းတာရေးအင်ဂျင်နီယာတပ်ခွဲ (အင်ဂျင်နီယာတပ်မဟာ )
• အီလက်ထရောနစ်စစ်ဆင်ရေးတပ်ရင်း ( ဆက်သွယ်ရေးတပ်မဟာ )
ဒီတပ်မဟာအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက် အခက်အခဲကတော့ လူပဲဗျို့။ ထောက်လှမ်းရေးအတွက် ဦးနှောက်တွေလိုမယ်။ တပ်မတော်မှာ အကောင်းဆုံးထဲက လိုမှာ။ စစ်ကြောရေးဆိုတာ မသင်္ကာတဲ့သူကို ဖမ်းရိုက်ဖို့လောက် သိတဲ့သူလောက်နဲ့တော့ မဖြစ်ပါ။ ဒါ့အပြင် ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူတွေလည်း ကျွန်တော်တို့မှာ မရှိသေးပါဘူး။ တရုတ် ( မန်ဒရင်း၊ ကန်တုန် )၊ ထိုင်း၊ ဘင်္ဂလီ၊ ဘာသာစကားတွေက ဦးစားပေးပေါ့။ အင်္ဂလိပ်ကတော့ လူတိုင်းပြောနိုင်ရမှာပေါ့။ ဟင်ဒီနဲ့ လာအိုကတော့ သိပ်မလိုလောက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွမ်းကျင်သူတွေတော့ ရှိရမှာပေါ့။
ကင်းထောက်အတွက်လည်း အကောင်းဆုံး၊ အရဲရင့်ဆုံး၊ အကြံခိုင်ဆုံး စစ်သည်တွေလိုမယ်။ အကောင်းဆုံးလည်း လေ့ကျင့်ပေးထားရမယ်လေ။ လေထီးလေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်။ ရေကူး ရေငုပ်၊ ကားမောင်း၊ အရေးပေါ်ဆေးကု၊ ဖောက်ခွဲရေးတွေ ၊ ဆက်သွယ်ရေးတွေ လေ့ကျင့်ထားရမယ်။ မိမိလက်နက်အပြင် ရန်သူလက်နက်တွေပါ ကျွမ်းကျင်နေရမယ်။ QBZ-95 , QBZ – 03, INSAS, AK-47, AK-74, Type – 81, M-16 , M-4 အားလုံးပေါ့။ ဒီမှာမမေ့ရမှာတော့ လက်နက်ပစ္စည်းဟာ သူ့ကို အသုံးပြုတဲ့ သူလောက်ပဲ ကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ A weapon is only as good as its operator.
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးတပ် အတွက်ကလည်း ဆက်ဆံရေးအကောင်းဆုံး၊ နောက်အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့စည်းအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိတဲ့ (အရပ်ထဲမှာ တပ်ထဲကလို နေ၊ ပြော လို့ကတော့ ရိုင်းတယ်အထင်ခံရမှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါ ။ နောက်အရပ်ဘက်မှာ တပ်ထဲမှာလို အမိန့်နဲ့ လုပ်လို့မရဘူး။ ညှိရနှိုင်းရတာတွေ အများကြီး) ၊ ဘေးလူအားကျလောက်အောင် ၀တ်တတ်၊ စားတတ်၊ နေတတ်တဲ့ စစ်သည်တွေလိုမှာပေါ့။
လူတွေမှာ Talent လို့ခေါ်တဲ့ နဂိုရှိတဲ့လူတွေရှာ ပြီးတော့ နဂိုင်း ဖြစ်အောင် Training နဲ့ လုပ်ယူရမှာပေါ့။ နဂိုမရှိပဲ နဂိုင်း မထွက်သလို - င်း မရှိပဲလည်း နဂိုင်း ထွက်မလာပါဘူး ။ တပ်မဟာ ၅ ခုစာ လူတွေရှာ ပြီးတော့ လေ့ကျင့်ဆိုတော့ မခက်တောင် မလွယ်တာ သေချာပါတယ်။
ရေးသားသူ MM at 5:02 PM No comments: